Iindaba - Ngaba ukunkcenkceshela ngedriphu kubhetele kunezitshizi
Unkcenkceshelo lokuchela, oko kukuthi, unkcenkceshelo lokunkcenkceshela, yindlela ephambili yokunkcenkceshela esebenzisa iseti yezixhobo ezikhethekileyo zokutshiza amanzi phantsi koxinzelelo emoyeni, ukwenza amathontsi amancinci, njengemvula, ngokulinganayo afafazwe kumhlaba olinyiweyo, kunye nendlela yokunkcenkceshela bonisa izityalo ngamanzi.
Nangona kunjalo, ukunkcenkceshela kokuchela kukwanemiqathango ethile: Kuchaphazeleka kakhulu ngumoya, kwaye amathontsi amanzi afafazisiweyo kufuneka afafazwe kubude obuthile ngaphambi kokuba awe. Ukuhamba kwayo kuchaphazeleka kakhulu ngumoya, otshintsha ukuhanjiswa kwamanzi kwinqwelomoya kwaye ichaphazele ukufana kokutshiza; Xa isantya somoya siphezulu kwaye ukufuma komoya kuphantsi, ilahleko yokukhukuliseka kunye nomphunga uya kuba mkhulu, ngamanye amaxesha ade afike kwi-10. % -30% yamanzi okunkcenkceshela.
Ukunkcenkceshela sisebenza kakhulu ekuboneleleni ngeelitha enye ukuya kwezine zamanzi ngeyure ngqo emhlabeni. Uncedo lweukunkcenkceshela ngaphaya zokuchela Kukuncipha kwamanzi ngenxa yokonyuka kolophu okanye ukubaleka.
Ukunkcenkceshela yeyona nkqubo yokunkcenkceshela ifanelekileyo nefanelekileyo. Endaweni yokumanzisa umhlaba wonke, amanzi agalelwa kuphela kwingcambu yesityalo. Eyona njongo iphambili ye ukunkcenkceshela kukufaka amanzi ngexesha apho izityalo ziwafuna khona kakhulu kunye namaxabiso afunekayo ukuze izityalo zikhule kakuhle.
I-drip Irrigation ingasetyenziswa ngokubanzi kwizityalo ezahlukeneyo zentsimi, igadi yeziqhamo, greenhouse, ifama, igadi njl.
Thelekisa nolunye uhlobo lokunkcenkceshela, zininzi izibonelelo zokusebenzisa iDrip Irrigation: